फेक समाचारको फन्दाः यस्तो छ धन्दा – Media Kurakani
फेक समाचारको फन्दाः यस्तो छ धन्दा
November 10th, 2015 Media Kurakani Feature Stories
हिजोआज मानिसहरुले सामाजिक सञ्जालहरुमार्फत नयाँ नयाँ खबर थाहा पाउँछन्। त्यहाँ सेयर हुने लिंक क्लिक गरेर मानिसहरु समाचार सामग्री वा वेबसाइटहरुमा पुग्छन्। आफ्नो नेटवर्कमा रहेकाहरुले सेयर गरेका सामग्री टाइमलाइनमा देखिएपछि स्वभाविक रुपमा चासो हुन्छ, क्लिक गरिन्छ र पढिन्छ। तर सामाजिक सञ्जालमा सेयर भएका सबै कुरा सत्य हुँदैनन्। गएका केही दिन इन्टरनेट तथा सामाजिक सञ्जालमा भेटिएका केही सामग्री हामीले यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ।
माथिको स्क्रिनसट हेर्नुस्, एउटा डरलाग्दो फोटोसहित भेटिएको यो लिंक फेसबुकमा खुब सेयर भैरहेको थियो। इन्डोनेसियामा ५ नेपालीलाई मृत्यु दिइएको भन्ने हल्ला फैलाएर आतंकित बनाउने यो पोस्टको उद्देश्य भिजिटर बढाउनु मात्र हो। जब तपाईँ क्लिक गरेर भित्र जानुहुन्छ, त्यहाँ हेडलाइन र फोटो अनुसारको कुरा भन्दा पनि अरु नै अन्टसन्ट कुरा लेखिएको हुन्छ।
तराई मधेसमा चलेको आन्दोलनका क्रममा छिमेकी मुलुक चीनको झण्डा जलेको र त्यस विषयमा आन्दोलनकारी शक्तिबीच पनि कुरा बाझिएको बैठकमा नेताहरुबीच आलोचना भएको खबर त सुनेकै हो तर माथिको फोटो हेर्नुस् त, नेताहरुबीच कुटाकुट नै भयो रे। यस्ता धेरै पोस्ट हल्ला वा अनुमानमा आधारित हुन्छन् र भिजिटरलाई गुगलको विज्ञापनमा क्लिक गर्न लगाएर आफूले डलर कमाउने लोभमा भिजिटर बढाउन मात्र यस्ता हेडलाइन राखिन्छ।
चीनले अनुदानमा दिएको पेट्रोल अझै ल्याइपुर्‍याइएको छैन तर कतिपय ‘समाचार’ मा भने यसरी हल्ला गरिएको छ मानौँ सबै ब्यापार अब चीनसँग सम्भव हुन्छ। चीनसँग व्यापार सम्भावनाको खोजीबारेको समाचारका शीर्षक यसरी राखिएको छ मानौँ नेपाल र चीनबीच पेट्रोलियम पदार्थका लागि पाइपलाइन बनाउने समझदारी नै भैसक्यो।
ल हेर्नुस् शीर्षकमै सक्दो सेयर गर्नुस् रे। ‘भारतसँग छाती खोलेर लड्ने बेला आयो’ भनेपछि हामी पाठक पनि के कम? भित्र सत्य असत्य के छ हेर्नुको साटो खुरुखुरु इन्टरनेट सञ्जालहरुमा सेयर गर्न थालिहाल्छौँ।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चोर औँलो देखाएको माथिको फोटो त हेरिहाल्नुभयो। शीर्षकमा भनिएको छ- नेपालीलाई भारत छोड्न धम्की। शीर्षकमै लेखिएको देखिहाल्नुभयो- एक सचेत नेपालीले स्कदो सेयर गरिदिनुहोस्। अब तपाईँले के बुझ्नुपर्‍यो भने यदि तपाईँ सचेत हुनुहुन्छ भने यो कुनै पनि हालताम सेयर गर्नु हुँदैन।
ल हेर्नुस् यो समाचार। नेपालमाथि नाकाबन्दी गरिरहेको भारतले नेपाललाई सोध्यो रे- भीडन्त गर्न खोजेको हो? भारतले सोधेकै हो त सम्पादकज्यू? कि अनुमान मात्र?
चाडबाडको बेला आन्दोलन र नाकाबन्दी। नागरिकको विचल्ली। माथिको समाचार हेर्नुस् त पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले पो चीनबाट तेल ल्याउँछु भनेछन्। तेल ल्याउन ज्ञानेन्द्रले चीनसँग वार्ता पनि गर्ने भएछन्। ओहो, दंग परेर जब लिंक क्लिक गर्नुहन्छ, थाहा पाउनुहुन्छ- भित्र केही पनि छैन। छ त युट्युब फ्रेमजस्तै एउटा विज्ञापन। यो हेडलाइनको उद्धेश्य भनेकै भिजिटर ल्याउने र यो विज्ञापन क्लिक गराउने थियो।
तराई मधेसमा दुई महिनाभन्दा बढी समयदेखि आन्दोलन छ, सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। तर माथिको फोटो हेर्नुस् त, मधेसी मोर्चा र सेनाबीच गोली हानाहान रे। जबकि सेनाले गोली चलाएकै छैन। स्थिति उत्तेजनात्मक बनाउने र भिजिटर तान्ने उद्धेश्यले हालिएको यो पोस्ट पनि फेसबुकमा खुब सेयर भएको थियो, किनभने यो पोस्ट फेसबुकमा पैसा तिरेर प्रमोट (विज्ञापन) गरिएको थियो।
थाहा पाउनुभयो मोदीको मास्टरप्लान त बिबिसीले सार्वजनिक गरेछ नि ! निवर्तमान प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हात मिलाएको फोटो सहितको माथिको लिंकले त्यही भन्दैन त? यसलाई पनि फेसबुकमा विज्ञापन गरिएको देख्नुभयो? यो कुनै समाचार होइन, पाठकका आँखामा छारो हालेर पैसा कमाउने उद्धेश्यमात्र हो।
नमस्कार गर्दै गरेको ज्ञानेन्द्रको फोटोसहितको लिंकमा हेडलाइन हेर्नुभयो? मधेसी मोर्चालाई दुई अर्ब खुवाउँदा पनि हार भएपछि नरेन्द्र मोदीले नेपालमा फोन गरे रे।
माथिको पोस्ट भन्छ, राजेन्द्र महतोले सबै पोल खोले तर पोल के खोलेका हुन् त्यो लेखकलाई त पत्तो छैन, पाठकलाई कहाँबाट पत्तो हुने?
हुँदाहुँदा कस्तो सम्म देख्न पर्यो भने फेसबुकमा ! भारतले नेपालमा हवाइ फायर गर्‍यो रे। आगलागी भयो रे अनि हजारौँ घाइते भए रे। यस्ता हल्लालाई छुट्याउन नसक्नेहरु त ठान्दा हुन् अब नेपाल र भारतबीच भौतिक युद्ध नै सुरु भएछ। दिक्क त त्यतिबेला लाग्छ जतिबेला अलि सचेत भनिएका फेसबुके साथीहरुले नै यस्ता पोस्ट सेयर गर्छन्।
अबदेखि समाचार पढ्दा वा सेयर गर्दा सबैले विचार गरौँ।
Originally published in PahiloPost
Tags blogging Online Journalism Online news portals
आन्दोलनको मारमा मिडियाः मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन »
« के छ पत्रकार महासंघले सरकारलाई बुझाएको १८ बुँदे मागमा?
अर्को रिस उठ्ने कुरा त के छ भने एडिट गरेर एउटाको टाउको अर्को ब्यक्ति वा जनावरको शरीरमा जोडिएर बनाएको नेता हरुको फोटो गाली गलौज सहित हजारौं ले पोस्ट र सेयर गरिरहेका हुन्छन् ! यस्तो अग्रपंक्तिमा आउछन् स्कुल क्याम्पसस्तरमा राजनीति गर्नेहरु !